काठमाडौँ उपत्यकामा मेघ गर्जनसहित हल्का वर्षा
फागुन २७, २०७४ BNNTV
काठमाडौँ, २७ फागुन । स्थानीय वायुको प्रभावका कारण अहिले काठमाडौँ उपत्यकाका कतिपय स्थानमा हल्का वर्षा भइरहेको छ ।
आज पनि दिउँसोपख मध्य र पूर्वी पहाडी क्षेत्रमा मेघ गर्जनसहित हल्का वर्षा हुने मौसमविद् कँडेलको भनाइ छ । पूर्वमनसुनको याम भएका कारण स्थानीय वायुको प्रभावले मेघ गर्जनसहित छोटो अवधिको वर्षात् गराउँछ । सामान्यतः ‘मार्च, अप्रिल र मे’ पूर्व मनसुनी याम मानिन्छ । तापक्रम पनि क्रमशः बढ्दै गएकाले मध्याह्नपछि बदली र वर्षा गराउने सम्भावना हुन्छ । मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार आज काठमाडौँको अधिकतम तापक्रम २६.६ र न्यूनतम तापक्रम १० डिग्री सेल्सियस छ ।
प्रकाशित : आइतबार, फागुन २७, २०७४१५:१४
प्रधानमन्त्री ओलीले मागे संसद्‍मा विश्‍वासको मत
१४ महिनापछि फुटवलमा फर्किएकाे थ्री स्टारकाे यस्ताे छ टीम
भष्ट्रचारीको मुखसमेत हेर्दिनँ भन्ने प्रधानमन्त्री ७८ लाख काण्डमा किन चुप ? ओलीमाथि शंका बढ्यो : विवेकशील
राम बहादुर बम्जन माथि लागेको आरोप निराधार भएको भन्दै छानबिन गर्न माग !
प्रचण्ड पत्नी सीताको स्वास्थ्य स्थिति के छ ? यस्तो भन्छ अस्पताल !
असहायका लागि न्यानो कपडा वितरण